काठमाडौं महानगरको स्वाव संकलन, के भन्छन् स्थानीय ? | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
काठमाडौं महानगरको स्वाव संकलन, के भन्छन् स्थानीय ?
Published On : १० मंसिर २०७७, बुधबार १५:२३
काठमाडौं महानगरपालिकाले टोल टोलमा गएर पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाव संकलन गर्न थालेपछि स्थानीय खुसी भएका छन् । महानगरले सुरु गरेपछि स्थानीय खुसी भएका हुन् । वडा कार्यालयहरु मार्फत जनशक्ति परिचालन गरी पीसीआर परीक्षणका लागि महानगरले स्वाव संकलन गरिरहेको छ । स्थानीय आदर्श लामिछाने महानगरको उक्त कामलाई समुदायको सुरक्षाका लागि राम्रो कदम भन्छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले अझ वृहत रुपमा स्वाव संलकन गर्न सके सबैको पहुँचमा पुग्ने आशा स्थानीय गर्छन् । अहिले विभिन्न मापदण्ड बनाएर स्वाव लिइरहेको महानगरलाई स्थानीय उद्धवप्रसाद लामिछाने अधिकांश जनता सःशुल्क परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा नभएकाले अभियानलाई बृहत बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
अर्का स्थानीय फाल्गुनी दाहाल केही समय बन्द भएर पुनः निशूल्क स्वाव संलकन भइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै महानगरपालिकाले मात्रै नभएर अन्य ठाउँमा पनि यसरी नै अभियान चलाउनुपर्ने बताउँछिन् । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष दिपेन्द्र लामाले संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कन्ट्याक ट्रेसिङ र सरकारले तोकेको मापदण्डका आधारमा स्वाव संकलन थालिएको बताए । संक्रमित एकाघरका ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरुको स्वाव संकलन थालिएको हो ।